OTU NWOKE EWERELA AKA ODO PỊAGBUE NWUNYE YA NA STEETI ANAMBARA – hoo!haa!!
OTU NWOKE EWERELA AKA ODO PỊAGBUE NWUNYE YA NA STEETI ANAMBARA
N’ụbọchị Tusdee gara aga ka ndi uwe ojii nke steeti Anambara nwụchiri otu nwoke aha ya bụ Jemis Nwọra n’ihi na ojirila aka odo tigbue
Ọbụ na ụlọ nwere akara nke abụọ na ogbe Ụmụdiọka, nke dị na Mgbuka Nkpọọ, n’okpuru ọchịchị ime obodo mgbago ugwu Idemili ka njinji a jiri.
Ụfọdụ n’ime ndi bịara mgbaru n’ebe egburu nwanyị a kwuru na tupu ihe a emee, na nwoke a na-akpabu agwa ka onye isi mgbaka. Jemis bụ onye Izii dị n’Abakeleke. Ọ na-anyabu ụgbọ-ala ọgba tim-tim eji-ebu ndi njem (ọkada). Mana mkwụsị akwụsịrị ndi ọrụ ọkada n’Anambara metụtara nwoke a.
Ekwuru na nwoke a na nwunye ya na-ebibu n’udo. Ekwukwara na ha na agba mgbere akam. Ndi mmadụ gosiri ịtụ n’anya mgbe ihe a mere n’ebe elekere abụọ nke ime abalị ka otebeghị aka ha jiri kwadochaa akam ha ga-ere ma chi ya foo.
Akụkọ kwuru na nwanyị a nke aha ya bụ Oriakụ Jenifa Nwọra nọ n’ụra mgbe di ya ji were aka odo pịarie ya isi.
Ekwuru na mgbe nwoke a kugbuchara nwunye ya, ọ kpọọ nwa nne ya nwoke n’ekwe ntị iji gwa ya na ya gburu nwunye ya, tupu na ndi uwe ojii abịa kpụrụ ya.
Onye isi ụlọ ọrụ ndi uwe ojii n’Ogidi bụ CSP Mak Ijarafu bụ onye kwuru na akụkọ a bụ ihe mere eme sịrị na-aga akpụga nwoke a na ngalaba ndi uwe ojii na-enyochapụta maka arụrụmala akpọrọ CID n’asụsụ bekee.
Ka ọdị kịta, ebugala ozu Jenifa n’ulọ ọba ozu.
Previous Post: K’anyị Lebaa anya na agwụgwa(RIDDLES), ma kọwaa uru agwụgwa bara
Next Post: EGWU (FEAR)/EGWU (MUSIC/PLAY)